Boxe chinoise : hampita ny traikefany Randriamalaza Jean Christian
Tsy mitazona ho azy samirery. Hanatanteraka ny fampanantenana efa nataony ny tompon-daka maneran-tany eo amin’ny “Boxe chinoise”, Randriamalaza Jean Christian. Naneho fahavonana ny hizara ny traikefany sy ny fahaiza-manaony eo amin’io taranja io ny tenany.
« Natao ho an’ny rehetra, tsy mifidy haiady sy fanatanjahantena ny fanofanana sy ny fampitana ny fahaiza-manao fa misokatra tanteraka », hoy izy.
Anisan’ny kintan’ny fanatanjahantena malagasy manana ny maha izy azy eto an –toerana sy any ivelany, Randriamalaza Jean Christian. Efa impito nahazo ny anaram-boninahitra maneran-tany eo amin’ny « Boxe chinoise Lei Tai » sokajy latsaky ny 75 kg.
Ankoatra izany ny fananany ny tepana mainty 5ème Dan eo amin’ny « Boxe chinoise » raha 3ème Dan eo amin’ny karate sy ny Kick Jitsu. Mpanao haiady malagasy, diamanga koa Randriamalaza Jean Christian ary manana ny voninahitra fahefatra amin’izany. Manampy ireo ny maha 2ème Dan azy eo amin’ny Full contact sy 1er dan eo amin’ny Taekwondo sy Yoseikan Budo.